Uhlelo lwe-05 Nights
I-SRINAGAR (IYAVELA) - I-PAHALGAM (I-02 NIGHTS) - IGULMARG (I-01 NIGHT) - I-SRINAGAR (I-02 NIGHTS) - ISUKU LONYAKA LONYAKA - I-SRINAGAR DROP
| | Ikhodi Yokuvakasha: 190
DAY 01: I-ARRIVAL - ISIKHATHI SABASINRINAGAR - IPAHALGAM
Ukufika ku-Airport ye-Srinagar uzothatha futhi uthumele ku-Pahalgam ukuhlala nobusuku be-02. I-Pahalgam (mtshalo we-2133) owaziwa nangokuthi 'Isigodi sabelusi noma iPharadesi yeTrkker. I-Pahalgam yindawo edume kakhulu ye-Indian Film Industry. Endleleni uvakashela ama-Aintipura, amaSafron amasimu Enye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni, idolobha lasePahalgam linikeza imibono yokuphefumula. Omunye angase ajabulele edolobheni lasePahalgam ukuya kwezinye zezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni. I-Pahalgam yindawo yokungena ye-Amarnath Cave edumile, isayithi elingcwele lamaHindu. Ngobusuku ehhotela e-Pahalgam.
Usuku olugcwele ku-Pahalgam ukuhlola indawo engokwemvelo. Umuntu angaqasha i-pony ukuvakashela i-Baisaran, isigodi saseKashmir, iDaban. Ngobusuku ehhotela e-Pahalgam.
Emva kwasekuseni kwasekuseni ekuseni ehhotela ukuya eGulmarg ukuhlala ubusuku bonke. (I-8700 ft ie i-2652 mts), itholakala yi-kashmiri yombongi wothando ngesikhathi sekhulu le-16th eliphefumulelwe ngezintambo zalo ezinotshani ezigcwele izimbali zasendle. Ebusika i-Gulmarg ibonakala inhle kakhulu ngenxa yokuwa kweqhwa elinzima. Futhi liphenduke libe yi-India 'Premier resort resort ebusika. Igalari ye-Gondola Cable (okukhethwa kukho) inikeza ukugibela emahlathini ase-upland e-Kongdori nakwezinye izindawo phezulu kwe-Apharwat ububanzi kuze kube ukuphakama kwe-14000 ft yokubuka i-Himalayan Peaks ehlobo nokukhuphuka kweqhwa ebusika. Ngobusuku ehhotela e-Gulmarg.
Ngemuva kokudla kwasekuseni ehhotela eSrinagar ukuhlala ubusuku bonke. Hlola ku-houseboat ye-deluxe. Kamuva uqhubekele eDeni elidumile le-Nishat elibizwa ngokuthi 'IJardin of pleasure' eyakhiwe ngekhulu le-16th (1633) nguMughal King Asif Khan. Bese uvakashela iShalimar Garden eyaziwa ngokuthi 'Garden of Love' eyakhiwe ngekhulu le-16th (1619) nguMughal King Jehangir kumkakhe othandekayo uNoor Jehan noma (Mehr -un- Nissa). Kusihlwa ujabulele iShikara Ride edolobheni elidumile laseDal Lake ukuze ujabulele ubuhle bokuthi uNkulunkulu ubeke leli dolobha, elivame ukufaniswa neVenice. Uzothola umbono omuhle wezindawo ezithile ezithakazelisayo ezungeze echibini. Ngobusuku kuhlale e-houseboat e-deluxe eSrinagar.
Ngemuva kokudla kwasekuseni eholidini lokuhamba ngebhayisikili kuze kube usuku lokuhamba ngeSanamarg okuyinto ehamba phambili kunazo zonke ukusuka eSrinagar. Endleleni uyayeka ezindaweni eziningi ezinhle. Qhubeka ushayela ku-Sonamarg 2690 Mtrs (i-Meadow yeGold). Umuntu angagibela ihhashi ukuvakashela iThajiwas Glacier (e-Pony) lapho iqhwa lihlala khona unyaka wonke futhi iNdamarg ibizwa ngokuthi i-Gateway yaseLadakh. Ukulala ebusuku ku-houseboat / hotel e-Srinagar.
DAY 06: SRINAGAR - ISIHLOKO
Ngemva kokudla kwasekuseni kwasekuseni endlini / ehhotela uvakashele ithempeli elidumile laseShankaracharya elakhiwe esiqongweni sentaba esibheke eDal Lake bese uhamba waya e-Airport ukuze uqhubeke.
Ngokwe-directive kaHulumeni, uceliwe ukuba uqinisekise ubufakazi bakho be-ID, njengokuthi: isithombe somqulu njengobunikazi belayisensi yokushayela / ikhadi le-ID yokupaka izimoto / ipasipoti / endaweni yokuhlola ehhotela. Siyazisa ukubambisana kwakho